रोकिएको अध्यादेशप्रति कस्तो छ राष्ट्रपतिको तयारी ? – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ रोकिएको अध्यादेशप्रति कस्तो छ राष्ट्रपतिको तयारी ?
रोकिएको अध्यादेशप्रति कस्तो छ राष्ट्रपतिको तयारी ?
पुलेसो १३ पुस, २०७८, मंगलबार १०:३७
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश शितलनिवासमा रोकिएको छ । यत्तिकैमा राष्ट्रपतिले विभिन्न तयारी गरेको खबर बाहिर आएको छ ।
के छ राष्ट्रपतिको तयारी ?
राष्ट्रपति निर्वाचित भएदेखि नै राष्ट्रपतिको कालभरी नै विवादमा आउनेगरी कुनै पनि निर्णय भएका थिएनन् । तीन सरकार झेलेकी भण्डारीको कार्यकालमा हुने निर्णयको जवाफ उनले भन्दा पनि नेताले संसदमा दिनुपर्ने भएकाले विवादका केही काम भएनन् । तर, राष्ट्राध्यक्षको कुर्सी छाड्नेबेला उनलाई विवादमा तान्ने कोशिश भएको छ ।
प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकेपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि तयार पारिएको अध्यादेश प्रमाणिकरण नगरेको विषयमा खासगरी नेपाली कांग्रेसले उनको विरोध गरेको छ भने सोचेर कार्यान्वयन गर्न बामपन्थीले दबाब दिएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित दलका नेतालाई राखेर सहमति बनाएर आउनुहोस् अध्यादेश प्रमाणिकरण गर्छु भनिसकेकी छन् । तर, दलीय मत विभाजनकाबीच उनलाई पारित गर्न र नगर्न भन्ने दबाब परेको छ । उनी दुविधामा रहेका कारणले राजनीतिक परामर्श जारी राखेकी छन् ।
उनले आइतबार संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपाका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेकी थिइन् । उनले अध्यादेशमा राजनीतिक सहमति जुटाउन आह्वान गर्दै आएकी छन् ।
दुई महिना अघि सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । एमालेले त्यसको विरोध गर्दै बहुमतीय प्रणाली हुनुपर्ने अडान लिइरहेको छ । सरकारले पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्ने र अड्काएर राख्न नहुने नेपाली कांग्रेसले बताउँदै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अब कसरि अगाडी बढ्ने भनेर कस्तो निर्णय लिने हो त्यो भने समयले नै देखाउछ । कान्तिपुर प्लस